Villarreal Oo Ku Guuleysatay Europa League – Heemaal News Network
Kooxda kubadda cagta Villarreal ayaa ku guuleysatay Koobka Europa League iyadoo rikoodheyaal ku garaacday Manchester United oo finalkii 5aad lagaga guuleystay intii uu Ole Gunnar Solskjaer tababaraha u ahaa.
Villarreal ayaa xaqiijisatay in ay gacanta ku dhigto koobka Europa League oo ay bandhig wanaagsan ka samaysay, waxaana ka caawiyey goolhaye Geronimo Rulli oo rikoodhihii ugu dambeeyey u dhaliyey, kana qabtay David de Gea.
Kooxda reer Spain ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxay la hormartay gool uu u dhaliyey Moreno, waxaase barbarraysay United oo qaybtii dambe uu u dhaliyey Edinson Cavani, waxaana 90kii daqiiqadood iyo waqtigii dheeraadka ahaa ee 30ka daqiiqadoodba ay kusoo dhamaatay 1-1.
Rikoodheyaal ama gool ku laad loo dhigay labada kooxood ayaa waxa 11-10 ku badisay Villarreal, waxaana Manchester United guul-darrada ku hoggaamiyey goolhayeeda David de Gea oo laadkii ugu dambeeyey laga qabtay.
Tababare Unai Emery ayaa dhigay taariikh kale, waxaanu markii afraad ku guuleystay koobka Europa League, iyadoo uu saddexda mar ee hore usoo qaaday kooxda Sevilla ee reer Spain, halka Manchester United oo koobkan qaadday sannadkii 2017 ay mar kale sii ahaanayso koob la’aan.
Maxkamadeynta Dad Ajaaniib ah Oo la Shaaciyay In Laga Bilaabayo Muqdisho